Accueil > Gazetin'ny nosy > Hopitaly Miaramila : Ory ny mpiasa sivily
Hopitaly Miaramila : Ory ny mpiasa sivily
Na hopitaly miaramila aza ny Hopitalin’i Soavinandriana dia tsy miaramila avokoa no miasa ao fa misy sivily. Na mpitsabo na mpandidy na mpitsabo mpanampy na mpampivelona na mpiasa mpanadio trano na irakiraka, sy ny sisa, dia misy sivily.
Omaly no nanaovana ny lanonam-pankalazana ny tsingerin-taona faha-130-n’ity toeram-pitsaboana isan’ny goavana eto Madagasikara ity. Ny filohampirenena Rajoelina mihitsy no tonga nanome voninahitra ny lanonana omaly.
Amin’ny fotoana fankalazana toa ireny moa dia tena toa tsy tehafin-dalitra mihitsy ny sehatra misy sy ny tontolony fa tena raitra sy manga avokoa. Niniana tsy nambara tamin’ny mpitondra fanjakana koa ny zava-misy ao, ary ny mpiasa ianjadian’ny tsindrihazolena na ny marary sy ny havan’ny marary mitsabo tena ao izay iharan’ny tsy rariny dia tsy mba manan-jo hikabary amin’ny fotoana toa ireny. Ny mpanao gazety no atonin’izy ireny ka itarainany. Tena ory sy mijaly ary mikaikaika ny mpiasa sivily ao amin’ity Hopitaly Miaramila eny Soavinandriana ity. Nahenoam-peo amin’ny fitarainany koa ny havan’ny marary.
Manomboka amin’ny tokony mba fiahiana ny mpiasa eo amin’ny raharaham-pitsaboana azy raha sendra marary izy, no nitarainan’ny mpiasa. Ny tokony hisitrahany ny kojakoja takian’ny fiarovany ny ainy eo ampanatanterahany ny asany (aron’akanjo, fonon-tanana, aro-vava-orona, sy ny sisa) dia nofy. Tsy mba misitraka izany tambin-jo izay fandrainy hatrizay ny mpiasa sivily, ary na mba tokony honerana aminy aza ny saran’ny laniny tamin’ny fitsaboany tena dia tsy azony fa mianto-tena ry zareo ao.
Maro fa tsy tambo isaina ny fitarainan’izy ireo e !
Ny fahitan’ny tompon’andraiki-panjakana izao lahatsoratra izao dia antenaina fa hanosika azy ireo hampanao fanadihadiana eny dia handray fepetra sy hanarina ny fahavoazan’ireo mpiasa velon-taraina.
TIM-RMDM : Tsy mahazaka olona
Minisitry ny fiarovam-pirenena : Hafa ny lazain’ny vavany sy ataon’ny tanany
Inty sy Nday : Tsy ho latsa-danja anie ny orinasa malagasy
Depiote : Sady bado no mpangataka
Farihin’Alaotra : Gaboraraka ny fitantanana ny trondro
Egdard Razafindravahy : Nodinganin’i Mama sôsy
Zotram-pitanterana eo Ambohijatovo : Manakorontana sy mampitohana lavareny ny fifamoivoizana
Inty sy nday : Nohitsakitsahin-jo ny malagasy
Miaramila : Tsy mahazo manararaotra ny fokonolona
Tsy fandriampahalemana eto Antsirabe : Tsy mety voafehin’ny mpitandro filaminana